Deg: Deg: Abwaan Shucayb Yare oo Ciidamada Boolisla somaliland Xabsiga u Taxaaben - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Deg: Deg: Abwaan Shucayb Yare oo Ciidamada Boolisla somaliland Xabsiga u Taxaaben
June 29, 2020 12:08 AM - Written by Warbaahinta AlloolNews
Warar warbaahinta Allool kasoo gaadhaya caasimada Hargeysa ayaa sheegaya in Ciidamadda Booliska Somaliland ay saacado ka hor gurigiisa kala baxay Abwaan Shucayb Yare oo dhowaan Maanso ku dhaliilay Madaxweyne Biixi.
Xukuumada Madaxweyne Biixi ayaa hore dhawr jeer abwaano ku xidhay suugano ay aragtidooda ku cabireyn, sidoo kale waxaa wararku sheegayan in Xukumadu si gaar ah u dhibsatay suugaanta da’yarkan oo ahayd mid si dhakhso ah ugu fidey Bulshada dhegahooda.
Weli ma jiraan warar intaas dhaafsiisan wixii soo kordha kala soco Allool News
Masuuliyiinta wasaarada waxbarashada somaliland ayaa hortagay gudida ilaalinta hantida qaranka
Xukuumadu kama run sheegayso wada hadalkii ay soomaaliya la gashay” xisbiga waddani.
Badhasaabka cusub ee gobolka gabilay ayaa kulan la qaatay laamaha dawlada.
Wasiirka waxbarashada somaliland oo ka hadlay kiiska cawo yar oo dhawaan lagu kufsaday hargaysa.
Deg: Deg: Qarax Muqdisho Ka Dhacay iyo Khasaaruhu Gaystay